BTG ရယ် YOBIT ရယ် I ရယ် — Steemkr
BTG ရယ် YOBIT ရယ် I ရယ်
maythzinkyaw42 in mso
Steemit ကလဲပိုစ့်တင်ရင်ထိချင်ရာထိနေတာနဲ့ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာလဲတလကျော်ပြီ။နေ့တိုင်းနီးပါးဝင်ဝင်ကြည့်ရင်းသက်ပြင်းပဲထိုင်ချနေရတယ်။ဒီနေ့တော့ထိချင်ရာသာထိကိုလဲတင်ချင်မယ်။စိတ်ကလဲထွေနေတယ်။။ဖြစ်ပုံက။ဒီတလောဘာမှလဲဟုတ်တိပတိမလုပ်ဖြစ်ဘဲယောင်ဝါးဝါးနေတာကြာနေပြီဆိုတော့လူလဲတော်တော်ပျင်းနေပီ။အဲ့ဒါနဲ့တနေ့$50သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြန်လှုပ်ရှားဖို့စဉ်းစားပြီးဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလိုက်ရှာတာရှာတာ။coinmarketcap ကိုထိုင်ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ BTG ကိုသဘောတွေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လောလောပဲ 22.7$နဲ့ 5btg ဝယ်လိုက်တယ်။ withdrawl လုပ်လဲလုပ်ရော လား လား ဒင်းက Maintenance တဲ့ ထိုင်ငိုပဲ။ တခြား site တွေမှာ ခုဆိုရင် 31$ ကျော်နေပြီဒင်းမှာ25$ ကနေမတက်နိုင်သေးဘူး။အရင်5$ လောက်ပဲကွာတာဆို withdrawl မပိတ်တက်တာမို့ ကိုယ်လဲအရင်မကြည့်မိဘူးပေါ့။ခုတော့5btgပိုက်ပြီးဗြမ္မာကြီးဦးခေါင်းပိုက်ထားရသလိုပဲကိုယ့်အဖြစ်က cry cry cry .
mso smartphonephotography cryptocurrency
3년 전 by maythzinkyaw42
7$နဲ့ 5btg ဝယ်လိုက်တယ်။ withdrawl လုပ်လဲလုပ်ရော လား လား ဒင်းက Maintainance တဲ့ ထိုင်ငိုပဲ။ တခြား site တွေမှာ ခုဆိုရင် 31$ ကျော်နေပြီဒင်းမှာ25$ ကနေမတက်နိုင်သေးဘူး။အရင်5$ လောက်ပဲကွာတာဆို withdrawl မပိတ်တက်တာမို့ ကိုယ်လဲအရင်မကြည့်မိဘူးပေါ့။ခုတော့5btgပိုက်ပြီးဗြမ္မာကြီးဦးခေါင်းပိုက်ထားရသလိုပဲကိုယ့်အဖြစ်က cry cry cry .
maythzinkyaw42 · 3년 전
Thanks for your comment. I'll correct my mistake.Thanks!
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maythzinkyaw from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.